KUBATSIRA MUNHU HORMONE MUTHAILAND 100% PRODUCT QUALITY
Isu tiri mumiriri wepamutemo wezvigadzirwa zveHGH muThailand. Isu tinoita kutengeserana kwenyika kumarudzi ose. Zvose zvatinogadzirwa zvine zvikwangwani zvepamusoro, zvinyorwa uye malayisensi. Dana ikozvino kana WhatsApp + 66 94 635 76 37 (Shandisa WhatsApp Get 2% Discount)
MAZANO OKUDZIDZA EMARCH! HORA HURU HURI MUTHAILAND GENOTROPIN NOKWANYA PEN 36 IU KUBVA "PFIZER"
19.99 ฿ Liquid kukanganisa: nhamba isina kururama yezvakataurwa (yakapiwa 3, inotarisirwa 1..2)
24 / 7 MUMUSORO WOKUDZIDZA & KUTENDA KUVANHU ZVOKUDZIDZA KUNYIKA
Shandisa MOBILE APPLICATION KUZIVA KUNYANYA UYE KUTI 5% KUDZIDZA
Chirongwa chacho chinogara nguva dzose newe, chinonyorera uye chinokurumidza kukwanisa kurongeka. Dharira ikozvino kubva kuTunes official uye uwane 5% zvishomanana.
Tora kubva kuApp Store
KUDZIDZWA KUNHU KUNYAYA KUNYAYA DZOSE DZENYAYA
Kuratidza kubhadhara uye kubhadhara mari muBangkok. Tiri kutumira growhormone neAir Cargo kuChiang Mai, Phuket. Taura maziso kuna Pattaya, Hua Hin, Udon Thani, Koh Samui, Koh Chang, Suratkhani uye mamwe maguta ose nemapurovhinzi eThailand.Courier delivery muBangkok - pharmacy yedu inotora mazano kubva ku9: 00 am - 8: 00 pm, mirairo yakagamuchirwa 3: 00 pm ichaendeswa musi we sameday.
NZIRA DZOKUSHANDISA HGH
Inowanzojaira kuvhara kweHGH ndeyokuti:
3 IU (0.9 mg) yevarume vane makore 30 anorema kubva ku80-120
Zviri nani kuita jekiseni mangwanani kusati kwasvika kudya kwemuviri usina chinhu kana kuti kana mushure mekudya kwekupedzisira maawa 2 mushure mekudya kwemanheru musati mavata (Sezvakaratidzwa zvinoratidzira, kugovana kuyerwa kwezuva nezuva muzvikamu zvakasiyana kunopa chiitiko chakafanana nejecha 1 pazuva)
HGH KUBATSIRA PASI POSE
Mahomoni haasi madhiragi. Izvo zvinhu zvepanyama izvo zvinokosha muupenyu hwako. Sezvaunenge uchikura, hurimoni yako inogadzirwa zvishoma nezvishoma, inotungamirira uye inowedzera kukwegura uye kutanga kwezvirwere zvine chokuita nemakore. Mahomoni ekusimbisa hutachiona hunoita kuti muviri wako uwedzere kuhuwandu hwehutachiona hwemahomoni kuburikidza nekuvadzosa kumatanho ayo muviri wako wakanga wakajairika mumakore ake maduku. Mirayiridzo yevatangi vekutanga: - Tanga ne 2IU zuva rega rega usati warara (pasina dumbu). - 5 mazuva nemazuva 2 aripo. - Tinokurudzira kuchinja nguva mangwanani / manheru (mwedzi miviri).
CHII HH BOX?
- Mari Yakajeka Kubhadhara kana iwe usingagamuchiri chigadzirwa chako
Ramba Uchibva FAKE HGH!
Hatidi kuti vatengi vedu vashandise mari pane chimwe chinhu chisingashande, uye mumamiriro ezvinhu akaipisisa chinokonzera kukuvadza kwakanyanya kuhutano. Saka hatisi kukurudzira kutenga kweH gener products. Zvigadzirwa zvedu hazvibvumirwi chete neDFA asiwo ndiyo inonyanya kugadziriswa yeHuman Growth Hormone inowanikwa pamusika nhasi, maererano neImS, inozivikanwa munyika yose yakashambadzira. HGH inosanganisira Somatropin, iyo ikemikari inogadzirwa zvakasikwa mumuviri womunhu, yakagadzirwa ne191 amino acid sekuenzanisa.
Mishonga yedu yeHGH inogadzirwa nevatungamiri vematengesi zvakakwana seAnkeBio, GeneScience Pharmaceutical uye Pfizer iyo inogona kuvimbisa vashandi vane hurumende uye yakasiyana-siyana inopesana nekunyengedza hurongwa hwekutendesa HGH chaiyo yepamusoro.